Xildhibaan- Wasiir Lafta Gareen Ayaa La Filayaa Inuu Beydhabo Kaga Dhawaaqo Inuu U Tartamayo Madaxweynaha K/Galbeed – Kalfadhi
Xildhibaan- Wasiir Lafta Gareen Ayaa La Filayaa Inuu Beydhabo Kaga Dhawaaqo Inuu U Tartamayo Madaxweynaha K/Galbeed
Xildhibaan Cabdi Casiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen), oo ah Wasiirka Tamarta iyo Biyaha Soomaaliya, ayaa ka degay magaalada Baydhaba, iyada oo la filayo inuu halkass kaga dhawaaqo inuu musharrax u yahay xilka ugu sarreeya Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed.
Wasiirku markii uu ka degay magaalada Baydhabo waxaa soo dhaweeyey shacab loogu diyaariyey halkaas, si ay ugu mash-xaradaan kuwaas oo watay boorar ay ku qoran yihiin ereyo muujinaya inuu yahay musharrax doonaya inuu kusoo biiro u tartamidda xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed.
Sida ay u sheegeen Kalfadhi dad ay ka mid yihiin suxufiyiin joogta Baydhabo, waxay tegista Baydhabo ee Lafta Gareen ka dhigtay magaalada mid la ciirciireysa xamaasadda doorashada madaxweynanimo ee halkaas ka dhici doonta 17-ka November, oo ay ka harsan tahay wax ka yar 25 maalin.
Halkaas waxaa ku sugan musharaxiin kale, oo ku dhawaaqay musharaxnimadooda, balse Lafta Gareen wali lama uusan hadlin warbaahinta.
Sida ay ilo xog ogaal ah inoo sheegeen waxaa teer iyo shalay Baydhabo ku sii qulqulayey gaadiid u badan kuwa aysan xabbaddu karin iyo ciidan oo sida la sheegay looga sii hormariyey Baydhabo xildhibaan Lafta Gareen, si uu gaadiidkana u isticmaalo, ciidamaduna u sugaan ammaankiisa. Dowladda Federaalka ayaana taageereysa Lafta Gareen.
Kulankii 16-aad ee kalfadhiga afaraad ee Golaha Shacabka oo soo dhammaaday